အားကစားလည်းမလုပ်၊ အစားလည်းမလျှော့ဘဲ သွယ်လျ လှပချင်ရင်.. | Myanmar Free Ads ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
Home / Fitness & Slim / Medicine / အားကစားလည်းမလုပ်၊ အစားလည်းမလျှော့ဘဲ သွယ်လျ လှပချင်ရင်..
အားကစားလည်းမလုပ်၊ အစားလည်းမလျှော့ဘဲ သွယ်လျ လှပချင်ရင်..
Maung Pauk 12:00 PM Fitness & Slim , Medicine
မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်၊ ယောက်ကျားလေးဖြစ်ဖြစ် ဝဝဖိုင့်ဖိုင့်ကြီးဖြစ်နေရင် ကြည့်ရတာ အဆင်မပြေသလို ကိုယ်တိုင်လည်း ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေတတ်ပါတယ်.. ဟိုသွားရမှာရှက်၊ ဒီသွားရမှာကြောက်... အလုပ်ကလည်းများလို့ အားကစားလည်းမလုပ်နိုင်ဘူး.. အစားလျှော့ဖို့ကလည်း မလျှော့ချင်ဘူး.. ပိန်ကလည်းပိန်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးကူသင့်ပြီ...
ဒီအတွက်တော့ Seven Break Gel လိမ်းဆေးလေး ညွှန်ပေးပါရစေ...
Seven Break Gel ဟာ သောက်ဆေးလည်းမဟုတ်ပါဘူး..
ရှားဇောင်းလက်ပတ်ကနေ ထုတ်ယူထားတဲ့ အဆီအနှစ်တွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ လိမ်းဆေး ဖြစ်ပါတယ်..
တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်လိမ်းပေးရုံနဲ့ အဆီပိုတွေကို ဖယ်ရှားပေးမှာဖြစ်ပြီး အသားလောင်ခြင်း၊ အနံ့ဆိုးခြင်းလည်းမရှိပါဘူး.. အဆီများတဲ့ အစားအသောက်ရှောင်မယ်၊ အိပ်ရေးဝဝအိပ်မယ်၊ လမ်းနည်းနည်း လျှောက်ပေးမယ်ဆို ပိုပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် အဆီကျစေမှာဖြစ်ပါတယ်.. ဂျပန်နိုင်ငံမှာ မိန်းကလေးတွေအများဆုံးအသုံးပြုပြီး သူ့တရားဝင် Website မှာတောင် တစ်ခုချင်းယူရင် 19.8 ဒေါ်လာရှိပါတယ်.. https://www.sevenbreak7.com/ မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... များများယူလို့သာ 15000 နဲ့ ရောင်းချပေးနိုင်တာပါ.. အတုတွေလည်းထွက်နေလို့ စိတ်ချရတဲ့နေရာကနေ ဝယ်ယူဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ...
ဈေးနှုန်းက တစ်ဘူးကို ၁၅၀၀၀ ကျပ်ပါ... စိတ်ဝင်စားလို့ ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့
Ph No. - 09451689031( Viber )
Ph No. - 09787179972 ကိုဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်...
မိနျးကလေးဖွဈဖွဈ၊ ယောကျကြားလေးဖွဈဖွဈ ဝဝဖိုငျ့ဖိုငျ့ကွီးဖွဈနရေငျ ကွညျ့ရတာ အဆငျမပွသေလို ကိုယျတိုငျလညျး ယုံကွညျမှုကငျးမဲ့နတေတျပါတယျ.. ဟိုသှားရမှာရှကျ၊ ဒီသှားရမှာကွောကျ... အလုပျကလညျးမြားလို့ အားကစားလညျးမလုပျနိုငျဘူး.. အစားလြှော့ဖို့ကလညျး မလြှော့ခငျြဘူး.. ပိနျကလညျးပိနျခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဆေးကူသငျ့ပွီ...
ဒီအတှကျတော့ Seven Break Gel လိမျးဆေးလေး ညှနျပေးပါရစေ...
Seven Break Gel ဟာ သောကျဆေးလညျးမဟုတျပါဘူး..
ရှားဇောငျးလကျပတျကနေ ထုတျယူထားတဲ့ အဆီအနှဈတှနေဲ့ ထုတျလုပျထားတဲ့ လိမျးဆေး ဖွဈပါတယျ..
တဈနေ့ ၂ ကွိမျလိမျးပေးရုံနဲ့ အဆီပိုတှကေို ဖယျရှားပေးမှာဖွဈပွီး အသားလောငျခွငျး၊ အနံ့ဆိုးခွငျးလညျးမရှိပါဘူး.. အဆီမြားတဲ့ အစားအသောကျရှောငျမယျ၊ အိပျရေးဝဝအိပျမယျ၊ လမျးနညျးနညျး လြှောကျပေးမယျဆို ပိုပွီး မွနျမွနျဆနျဆနျ အဆီကစြမှောဖွဈပါတယျ.. ဂပြနျနိုငျငံမှာ မိနျးကလေးတှအေမြားဆုံးအသုံးပွုပွီး သူ့တရားဝငျ Website မှာတောငျ တဈခုခငျြးယူရငျ 19.8 ဒျေါလာရှိပါတယျ.. https://www.sevenbreak7.com/ မှာ လလေ့ာနိုငျပါတယျ... မြားမြားယူလို့သာ 15000 နဲ့ ရောငျးခပြေးနိုငျတာပါ.. အတုတှလေညျးထှကျနလေို့ စိတျခရြတဲ့နရောကနေ ဝယျယူဖို့ တိုကျတှနျးပါရစေ...
စြေးနှုနျးက တဈဘူးကို ၁၅၀၀၀ ကပျြပါ... စိတျဝငျစားလို့ ဝယျယူခငျြတယျဆိုရငျတော့
Ph No. - 09787179972 ကိုဆကျသှယျမှာယူနိုငျပါတယျ...